China Sprockets na ngalaba maka ndị na -egwupụta ihe na ndị na -emepụta dozer na crane | Jinjia
Sprockets na ngalaba maka ndị na -egwu ala na dozer na crane
Họrọ ụdị sprocket na sprocket hub site na 0.2 ruo 120 ton crawler heavy excavator, igwe ịchacha na igwe ndị ọzọ pụrụ iche.
Mgbapu nkedo, mkpọchi na ụdị njikọ njikọ ụdị sprocket na ụdị ịgbado ọkụ nwere ike ijide n'aka na nzukọ zuru oke yana nwekwara ike wepu ihe egwu nke bolt enweghị ike idozi oghere ma ọ bụ tọpụ.
Ịdị omimi nke imenyụ nke ọma na-eme ka mgbochi mgbochi na ogologo ndụ dị ogologo.
Mkpuchi miri emi nke ukwuu na usoro ịdị omimi siri ike na profaịlụ ezé niile na -enye ndụ ogologo oge. Ma ọ bụ site na nchara nchara ma ọ bụ site na ịkpa oke ọkụ, MZ sprockets na -ekwe nkwa nkwụsi ike na ịdịte aka ọbụladị na ngwa ndị kacha sie ike. Ezi igwe na -arụ ọrụ nke oghere na flanges na -enye mgbanwe zuru oke.
Na -esiri ike maka nguzogide ka mma. Ala dị elu, ịdị omimi na isi ike pụtara akụkụ MZ na -enye ndụ ogologo oge, iguzogide ikwe ekwe, mgbaji na njigide ngwaike kachasị. Nhazi mkpọchi mkpọchi na-ebelata oge ọdịda igwe gị.
1. Nkedo nchara ma ọ bụ nchara na -acha ọkụ ọkụ ka ọ na -aga
2. Omimi siri ike omimi 4-8mm maka HRC45
3. Na -agbasi mbọ ike iguzogide mgbawa na mgbawa
4. Kachasị imewe iji belata ebe ịta ahụhụ
5. Ịchụ nta nha nha na -agbatị ndụ ndụ
6. Ịrụ ọrụ nke ọma na -arị elu na -eme ka arụmọrụ kacha mma
1.Hot esorowo maka ezigbo mkpụrụ ọka n'ime
2.Through obi tara mmiri maka elu n'elu ekweghị ekwe (HRC> 50) na isi ike (HRC 45)
3.Precise imewe na ezi machining nke arịọnụ ebupụta hụ kacha mma arụmọrụ
Nke gara aga: komatsu track link assy emeputa na China
Osote: Caterpillar Crawler Excavator undercarriage IDLER
Ihe mkpuchi ụgbọ ala